हाइड्रोसीलको बारेमा बरिष्ठ आयुर्वेद डाक्टर राम बहादुर बोहराको अनुसन्धान र अनुभव
जुलाई 7, 2019 जुलाई 7, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments डा. राम बहादुर बोहरा, हाइड्रोसील
हाइड्रोसीलको बारेमा डा. बोहराको अनुसन्धान र अनुभव । नेपाली भू-भागमा यस्ता अनेकौं जडिबुटी छन् जुन हामीले प्रयोग गरेर लाभ उठाउन सकिरहेका छैनौं । मेरो भन्नुको अर्थ केहो भने कुनैपनि बस्तुलाई हामीले जबसम्म प्रयोग गर्दैनौ भने वास्तविक कुरा पत्ता लागाउन गाह्रो हुन सक्छ ।
मैले करीव १५०० जति स-साना बच्चाको हाइड्रोसिल केवल बुटीको साहेताले निको बनाउन सफल भएको छु । यो मेरो मात्र अनुभव होइन मेरो बुबाले पनि यस्ता थुप्रै रोग निको बनाउनु भएको थियो । बुबाको सेखपछि केहि व्यक्तिहरूले मलाई आग्रह गरेतापनि मैले प्रयोग गरेको थिएन मलाई विश्वास थिएन ।
एकपटक गाउकै एउटा बच्चाको उपचार गर्नुपर्ने भयो पहिलो पटक उपचार गराउदा मैले के सन्चो होला जस्तो लागेको थियो तर आश्चर्य त्यतिबेला भए जब त्यो बच्चाको हाइड्रोसील निको भएको मैले देखे । आज मैले हरेक शनिबार हाइड्रोसीलको उपचार नि:शुल्क गरेको छु ।
हामीले केवल साना-साना बच्चाहरूको मात्र जडिबुटी उपचार गर्दै आएका छौं । ठुल-ठुला विरामीको भने हामीले यो रोगको उपचार गरेका छैनौ । ठूलो मानिसको हकमा रोग लागि सकेपछि लुकाउनु हुन्न । लुकाए आफैंलाई गाह्रो पर्छ भन्ने थाहा पाएपनि हाइड्रोसिल भएका बिरामी लुकेर बस्ने गरेको पाइन्छ ।
हाइड्रोसिललाई फाइलेरिया अर्थात् हात्तीपाइले रोगमा गनिन्छ । यस्ता खालका रोगमा पनि अब हामीले जडिबुटीबाट उपचार गर्ने विचार गरेका छौं । यसरी गरेको उपचारले निको बनाउन सके विरामीलाई ठूलो राहत हुने देखिन्छ । यसले धेरैको उद्धार हुने निश्चित छ । रोग लुकाउने होइन भन्ने भावना सबैमा जाग्न आवश्यक छ ।
हात्तीपाइले रोगको संक्रमण भएका बिरामीमध्ये अधिकांश हाइड्रोसिल भएको हुनसक्ने केहिको मत छ । यसमा हाइड्रोसिल भएकाहरू डाक्टर कहाँ उपचारका लागि नआउनु पनि एउटा समस्या हो । सरकारले यस्ता रोगको उपचार नि:शुल्क गर्न सक्छ । यस्तो लक्षण देखिनासाथ डाक्टरको परामर्शमा उपचार गराउन सके यो ठूलो समस्या होइन बरू नदेखाई बसेमा समस्या देखिन सक्छ ।
← मोटोपना कम गराउने उपायहरु
महिला र यौन स्वास्थ्य →